M/weyne Faroole oo Adis Ababa kula kulmay M/weyne Shariif & Mesfin, wasiirka arrimaha dibedda ee Ethiopia. – Radio Daljir
Abriil 2, 2010 12:00 b 0
Adis Ababa, Apr 02 – Madaxweynaha Puntland Cabdiraxman Maxamed Faroole ayaa kulan la qaatey maanta 1 April, 2010 Wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Sayoum Mesfin.
Kulankaan oo ka dhacey xafiiska Wasiirka Arimaha dibada ayaa waxaa labada mas?ul kaga hadleen xiriirka Puntland iyo dowladda Ethiopia, xaalada guud Somalia waxeyna isku afgarteen dhamaan qodobadii laga wada hadley.
Waftiga Madaxweynaha Puntland uu hogaaminayo ayaa intii ay ku sugnaayeen magaalada Addis Ababa waxey kulamo muhiim la qaateen mas?uliyiin sare ee ka tirsan dowladda Ethiopia, sidoo kale waxaa kulan kooban oo is-afgarad ku dhamaadey la qaatey Madaxweynaha dowladda Federaalka iyo waftigiisa.
Xafiiska Madaxweynaha dowladda Puntland
Wasiirka Kalluumaysiga Puntland iyo waftigiisii oo wali kulamo is daba-joog ah la leh bulshada gobolka Cayn.